कसरी सधै खुसी हुने ? – Saurahaonline.com
कसरी सधै खुसी हुने ?
जिन्दगीमा सफलता हात पार्नका लागि मानिस खुसी हुन आवस्यक पर्दछ । उर्जाशिल हुनु एउटै उत्तम उपाय खुसी हुनु हो । खुसी भएमा हामी स्वस्थ रहन सक्छौ र उर्जाशिल बन्न सक्छौँ । त्यसैले हामी सबै खुसी हुन चाहन्छौँ।
जिन्दगीलाई यसरी खुसी राख्न सकिन्छ ।
ध्यानले एकाग्रता बढाउँछ। तनाव कम गराउँछ। मानिसलाई शान्त बनाउँछ। ध्यानले सकारात्मक ऊर्जासमेत बढाउने भएकाले ध्यान गर्ने मानिसहरु समेत खुसी हुन्छन्। ‘ध्यानले दिमाग स्वच्छ हुन्छ र तनाव पनि घटाउँछ,’ साउन एकर पुस्तक द एडभान्टेज अफ ह्याप्पिनेसमा लेख्छन्।